Maxay tahay sababta aysan ragga iyo dumarka u wada ciyaari karin kubadda cagta? - BBC News Somali
Stephanie Labbe waa gabadh caan ah oo ciyaarta kubadda cagta, ahna goolhaye aad looga yaqaanno caalamka.
Canada ayaa dalka Cameroon uga badiyay 1-0 ciyaaraha koobka adduunka ee sannadka 2019-ka ka socda dalka Faransiiska, ciyaartaas oo dhacday maalintii Isniinta ahayd ayaa noqonaysa markii 30-aad oo ay ku guulaysteen 62 ciyaarood oo ay dheelaan. Stephanie Labbe waxa ay u ciyaartay xulka qaranka Canada.
Balse Labbe waxaa si weyn u hadal heysay warbaahinta kaddib markii ay ku biirtay kooxda ragga ee Calgary Foothills sannadkii 2018-kii.
Gabadhan oo gool -haye u ahayd kooxda ayaa soo bandhigtay ciyaar xiiso leh, balse xiriirka kubadda cagta adduunka ayaa ka mamnuucay inay ka qayb qaadato ciyaaraha.
Haweeneydan 32 jirka ah ayaa kala qeybsanaan ka dhex dhalisay madaxda sare ee xiriirka kubadda cagta ee adduunka.
Mabda'a kala qaybsanaanta
Sannadkii 2004-tii FIFA waxa ay sheegeen " Waa in si cad loo kala saaro ragga iyo dumarka, aysann ciyaar dhex mari karin".
Fifa ayaa diiday go'aan gacan siin lahaa Dominguez oo ay soo saareen xirriirka kubadda cagta ee Mexico.
Isbaddelka ciyaaraha Olimbikada
Ciyaaraha qaar ayaa sida lafansanayahy aanan ahayn kuwa ragga iyo dumarka laga filan karo inay keenaan isku natiijo.
Baaritan ay saynisyahanada sameeyeen 2010-kii ayaa lagu sheegay in bandhigga kubadda ee ragga ay 40% ka sareyso tan dumarka.
"Tartan u dhexeeya ragga iyo dumarka ayaanan ka dhicin adduunka marka la eego ciyaaraha qaar oo aad u adag.
Maskaxda iyo murqaha
Ciyaartoyda ayaa badanaa lagu qiimeeyaa hab dhiska jirkooda taasi oo horseedi karto in aad natiijo wanaagsan gaartid.
"Marar badan ayaan la ciyaaray qaar ka mid ah ragga, waa ay iga xoog badnaayeen weyna iga itaal dheeraayeen. waan ogahay marka aad la ciyaaraysa dadkaas oo kale , waa niyad jabeysaa balse waa inaad adeegsataa maskaxdaada." ayey tiri Marta.
Mar ay ka hadashay khibraddeedii bishii la soo dhaafay, Stephanie Labbe waxaay sheegtay in raggii ay la ciyaareysay ay xoog u sheegteen.
"Aad ayey u dhib badantahay in lagu yiraahdo ma ciyaari kartid maxaa yeelay sabab aanan waxba laga qaban karin gabi ahaanba." ayey tiri Labbe.
"Ma ahan, wax inta aan guriga tego aan wax ka baddeli karo. Jinsiyadaydu weligeed ma baddelmayso."
Federico Luzzi, waxa uu wax ka baraa jaamacadda Aberdeen ee ku taalla Scotland, waxa uu sheegay in FIFA ay ku qaldantahay kala saaridda ragga iyo dumarka.
"Xitaa haddii aysan run ahayn in gabadhaha xirfadda u leh kubadda cagta aysan u ciyaari karin sida ragga, ma ahan in xiriirada kubadda cagta ay qaatan go'aan ay ku xaddiddayaan isdhexgalka dumarka iyo ragga ciyaartoyda ah." ayuu yiri.
Dadka gebi ahaanba kasoo horjeeda tallaabadan ayaa ku doodaya "inay ka shaqeyneyso badqabka haweenka ayna ka ilaalinayso dhibaatooyin badan.